Isipho sokuba ngumntwana womntwana
Iziganeko ezininzi zenzeka ebomini, kwaye ukukhulelwa komntwana kubakho kanye, kwaye ngoko kubomi bomntu akukho nto ibaluleke kakhulu, njengomtshato. Ngako oko, lo mcimbi kufanele uhanjiswe kunye nazo zonke izibophelelo kunye noxanduva. Kwaye ke, ungalibali malunga nezipho ze-christening.
Ukuba ungumama okanye ubaba kumntwana, kuya kuba nzima ukukhetha isipho. Siza kucinga ukuba yintoni eyokunika inkwenkwe engumKristu. Kukho iindlela ezimbini: ungathenga into ethile yendabuko okanye into ethile yangaphambili. Okukhethileyo kukuhle - kwiikristen ungenza inkwenkwe isiliva yesilivere okanye ihembe. Konke oku luncedo kwinkwenkwe ebomini bakhe. I-spoon yesilivere iya kuba yi-godson yokuqala i-tabletware ebomini, kwaye kwi-shirt iya kuthwala i-christening yomntwana. Kwaye ungacela inkosi ukuba ilandele inkosi ukuba ibhale igama lakhe okanye ibhale umthandazo okhethekileyo wengane. Konke kuxhomekeke kubuchule bakho kunye nokucinga.
Xa ukhetha isipho kwinkwenkwe, cinga iminyaka yakhe
Ngokuqhelekileyo ii-christenings ziyenziwa xa abantwana abasanda kuzalwa kunye nabazali ngokukhawuleza banqwenela ukumncedisa umntwana kwicawa nakwinkcubeko yokomoya. Kodwa kukho ukungafani, xa umntwana ebhaptizwa ebudaleni. Icawa ivumela abantu abaneminyaka eyahlukeneyo ukuba babhaptizwe. Kwaye awukwazi nje ukunika i-spoon yesiliva okanye ihembe, kodwa ucinge nangakumbi ngezipho ezininzi. Ngokuqhelekileyo abazali abancinci badinga i-stroller, amathoyizi, iimpahla zentsana. Ukuba awukwazi ukuba unike inkwenkwe i-christening, ungabonisana nabazali bentsana uze ubabuze into abayidingayo. Inkwenkwe ekhulile isele ikhethwayo kunye nezinto ezithandwayo, kufuneka uyibuze malunga nayo. Mhlawumbi amaphupha ebhola lebhola, imoto elawulwa ngomsakazo, ibhayisekile.
Isipho sentombazana engumKristu
Ukuba uya ku-kristen kwintombazana, ngoko unokukhetha kwaye unike isambatho esihle, esinephepha kunye nekhati. Kwizinto ezi zinto ungayifaka i-initials yentombazana. Imibala emihle yintombazana iya kuba: i-beige, i-turquoise, emhlophe, i-pinki. Ukongeza kweso sambatho, kukho isithethe sokunika intombazana yamantombazana engumKristu. Ingaba yipipi, ishokoledi, i-candy. Ngosizo lwesipho esinjalo, amantombazana afuna ukuphila ubomi obuhle. Kwi-christening, umntwana anganikwa umhlobiso, uya kugqalwa kwixesha elizayo. Ingaba yintsimbi, iincwadana zeenwele, i-brooch, i-pendant, iyinqweneleka ukwenza ukuba ilandele.
Kwintombazana endala, unokunikela into ehambelana nezinto ezithandwayo kunye nezinto ezithandwayo. Mlethe iingubo ezikhethileyo okanye idonsa enhle. Kulula ukukhetha isipho kwintombazana e-christening.
I-christening kwanoma yimuphi umntwana ngumcimbi obalulekileyo kubantwana kunye nabazali. Kubalulekile kungekuphela ukukhetha isipho esifanelekileyo kumntwana, kodwa ukubonisa ngokuvuya kunye neenqweno zinyanisekileyo, ukuze umntu omncinci abe nobomi obonwabileyo. Unokwenza isipho esibi - ukunika iBhayibhile kwisigxina esiqinileyo, ukushicilelwa kakuhle okanye icon enkulu. Esi sipho siza kuhlala sisaphila kwaye siya kukhumbuza umntwana wesiganeko esibalulekileyo ebomini bakhe.
Indlela yokulahla iphunga elimnandi kwigumbi
Indlela yokufunda ukudanisa i-striptease kumntu othandekayo
Indlela yokunyamekela imihlobiso evela kwigolide
Iimpawu eziwusizo zee-anyanisi negalikhi
Yintoni ekubonayo unyaka weBlue Horse
Indlela yokuziva umoya weKrisimesi eYurophu kwaye udibana neeholide ekhaya?
I-Horoscope ngenyanga kaJanuwari nge-scorpion
Imbali yokuphuhliswa kokwenza nokwenza
ICinnamon kunye nezixhobo zayo zokwelapha
Imigcobo yemitshato enomtsalane kwihlobo le-2011
Ubomi bomntu kaRegina Todorenko namhlanje: iindaba zakutshanje
UkuNyuka kweeNyawo noNyango
UBar Alibasov uhlanganiswe kwi-intanethi "ye-naked" ividiyo yomculi odumileyo
I-East Chinese Horoscope 2011
Iseluleko ekukhuseleni amalungelo omguli
Iibhisikidi zeSesame kunye nobisi olunamanzi
Iintsuku ezibalulekileyo kubafazi
Isobho lomgquba nge-ginger
Isidlo sakusihlwa esifanelekileyo siqinisekiso sezempilo kunye nokulawula ubunzima
I-ice cream ye-yogurt ne-raspberries kunye nama-blackberries
Ukusuleleka kwefungal yemiphunga
Ngonyaka nje: i-Base Cloakroom esuka kwi-Top Secret